Kuvele okunye ngendiza eyayihamba uDhlomo | IOL Isolezwe
Kuvele okunye ngendiza eyayihamba uDhlomo
Isolezwe / 26 November 2012, 4:44pm /
KUVELA okunye ngoNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sibongiseni Dhlomo ngokusebenzisa kwakhe indiza yabezimo eziphuthumayo. Kuthiwa wayeziyela emngcwabeni kasomabhzinisi uMnuz Zacharia Zungu hhayi ukuyodambisa isimo KwaHlabisa njengoba kwakushiwo phambilini
SEKUVELE ukuthi uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sbongiseni Dhlomo akakhulumanga okuyikho ngokusebenzisa kwakhe indiza enophephela emhlane yezimo eziphuthumayo nalapho ayedalule ukuthi wayephuthuma kwaHlabisa ukuyodambisa isimo emphakathini wakuleya ndawo.
Abantu bakuleya ndawo kuthiwa babethukuthele becasulwe yisenzo zikadokotela owadlwengula intombazane eneminyaka engu-16 ubudala.
Konke lokhu sekuvela ukuthi kwakungesilona iqiniso kodwa uDhlomo wayeziyele emngcwabeni kasomabhizinisi uMnuz Zacharia Zungu ongumkhwenyana wesikhulu sesibhedlela sakwaHlabisa uNkk Dawn Zungu.
Ngokombiko weSunday Tribune enguzakwabo weSolezwe, uDhlomo kuthiwa watetemuka ngale ndiza ekubeni kuyiyona yodwa esetshenziswa abezimo eziphuthumayo uma kukhona ogulayo odinga usizo oluphuthumayo.
Le ndiza kuthiwa yayidingeka endaweni okwenzeka kuyo ingozi yemoto ngaseShongweni ku-N3 lapho okwakudingeka khona ukuthi umfana oneminyaka engu 15 athathwe ngendiza aphuthunyiswe esibhedlela kodwa yangatholakala kwathiwa ihambise uDhlomo kwaHlabisa.
Ngenxa yalokhu kwaphoqeleka ukuthi u-Asheen, umfana owayedinga usizo lwendiza, aphuthunyiswe eNkosi Albert Luthuli Hospital nge-ambulensi wafike washona nokunenkolelo yokuthi ukube wayehanjiswe yindiza enophephela emhlane wayeyosheshe afike esibhedlela athole usizo.
Omunye wabantu ababekulo mngcwabo uNkk Nikiwe Xulu futhi owayeqashelwe ukupheka uthe wayibona indiza ifika noDhlomo kulo mngcwabo.
“Ngangizobeka ukudla lapho kwakunenkonzo yomngcwabo khona ngabona uDkt uDhlomo efika ngendiza eze kulo mgcwabo engangipheka kuwona futhi engakuqaphela kuye wukuthi uyindoda ethandekayo,” kusho uNkk Xulu.
UMfundisi Ngubane owayephethe inkonzo yomngcwabo naye ukuqinisekisile lokhu wathi ngesikhathi uDhlomo etheleka ngale ndiza enophephela emhlane wonke umuntu waqalaza eyibuka kanti nalapho eyahlala khona kwakuyindawo eyayilungisiwe.
Lesi sigameko uDhlomo simfake enkingeni njengoba abaholi bamaqembu aphikisayo befuna aziphendulele kabanzi ukuthi kungani aqamba amanga.
Amaqembu aphikisayo okuyi-IFP, DA ne-ACDP afuna uDhlomo achaze kabanzi ngalesi senzo sakhe ukuze nomphakathi wazi ukuthi kwenzekani ngoba yiwo othembele kakhulu kule ndiza njengoba kuyiyona yodwa ekhona esifundazweni esiza uma kunezimo eziphuthumayo okubalwa kuzona nezingozi zomgwaqo.
Okunye la maqembu akhala ngakho wukuthi kungani uDhlomo ancamela ukutetemuka ngendiza yezimo eziphuthumayo ekubeni zikhona izimoto avamise ukuhamba ngazo njengoba ayeziyela emngcwabeni.
Imizamo yokuthola uDhlomo ukuze aziphendulele ibhuntshile kanti nangesonto eledlule wakhombisa intukuthelo ezintathelini zeSolezwe ngesikhathi zimbuza ngalolu daba eLamontville wagcina ngokuthi azixoshe emhlanganweni wewadi ye-ANC.